ESI MEE KA JAVA NA CHROM - NETWORK NA INTANETI - 2019
Esi mee ka java na chrom
Enweghị ike ịnweta plug-in Java na nsụgharị Google Chrome n'oge na-adịbeghị anya, yana ụfọdụ plug-ins ndị ọzọ, dịka Microsoft Silverlight. Otú ọ dị, ọdịnaya dị ukwuu na-eji Java na Intaneti, ya mere ọ dị mkpa ka Java dị na Chrome nwere ike ibilite maka ọtụtụ ndị ọrụ, karịsịa ma ọ bụrụ na enweghị ọchịchọ dị ukwuu iji gbanwee iji iji ihe nchọgharị ọzọ.
Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na kemgbe April 2015, Chrome nwere nkwarụ NPAPI maka plug-ins (nke Java na-adabere na ya) na ndabara. Otú ọ dị, n'oge a ka oge na-aga, ikike ịkwado nkwado maka plugins ndị a ka dị, dị ka egosiri n'okpuru ebe a.
Kwado Java ngwa mgbakwunye na Google Chrome
Iji mee ka Java nwee ike, ị ga-achọ ka ị jiri ntinye NPAPI na Google Chrome, nke ihe a chọrọ.
Nke a na-eme elementrị, n'ụzọ nkịtị na nzọụkwụ abụọ.
Na nbanye adreesị, tinye chrome: // flags / # enable-npapi
N'okpuru "Kwado NPAPI", pịa "Kwado".
N'okpuru windo Chrome ahụ ga-egosi ọkwa na ịkwesịrị ịmalitegharịa ihe nchọgharị ahụ. Mee ya.
Mgbe ịmalitegharịrị, lelee ma java na-arụ ọrụ ugbu a. Ọ bụrụ na ọ bụghị, jide n'aka na agbanyere ngwa mgbakwunye na ibe. chrome: // plugins /.
Ọ bụrụ na ị hụ akara ngosi mgbochi ngwa ngwa n'akụkụ aka nri nke mkpado mmanya Google Chrome mgbe ị banyere na peeji nke Java, ị nwere ike pịa ya iji kwe ka plugins maka ibe a. Ọzọkwa, ị nwere ike ịtọ akara "Mgbe niile" maka Java na ntọala akọwapụtara na paragraf mbụ ka a ghara igbochi ngwa mgbakwunye.
Ihe abụọ ọzọ kpatara Java nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ na Chrome mgbe ihe niile akọwapụtara n'elu emeelarịrị:
Ejiri arụmọrụ nke Java arụnyere (ibudata ma wụnye site na website java.com)
Enweghi ike itinye mgbakwunye. Na nke a, Chrome ga-agwa gị na ọ dị mkpa ka a rụnye ya.
Biko mara na ọzọ na ntinye nke NPAPI enwere ngosi na Google Chrome, malite na mbipute 45, ga-akwụsị kpamkpam nkwado ụdị plugins (nke pụtara na ịmalite Java agaghị ekwe omume).
E nwere olileanya ụfọdụ na nke a agaghị eme (n'ihi n'eziokwu na mkpebi ndị metụtara nkwụnye ins nkwụsị adịghị egbu oge site n'aka Google), ma, o sina dị, ị kwesịrị ịdị njikere maka nke a.